Iyini Iholo Elimaphakathi eJalimane
ISIQINISEKISO SEBASER GERMAN
EPHAKATHI - IZIKHUNDLA EZIPHAKAMILE ZASEGERMAN
IZIKHATHI NEZIGwebo ZAMAJalimane
IJAPANE IZIKHATHI ZOKUKHULUMA
Umholo omncane waseJalimane wango-2021
Umholo omncane waseJalimane wango-2021 inani seliphenduke esinye sezihloko wonke umuntu anelukuluku lokwazi ngazo.
HUMUSHA THOLA IMALI
Ubuncane beholo umkhuba obeka ubuncane beholo elingatholwa noma yimuphi umuntu osebenza ezweni. Ngalo mkhuba, osetshenziswa emazweni amaningi aseYurophu, abaqashi bayavinjelwa ukuba banikezwe amaholo angaphansi kakhulu kwezisebenzi zabo, futhi amalungelo abasebenzi ayavikelwa. IJalimane iyizwe eliqasha abasebenzi ngezikhathi ezithile. Isizathu salokhu yizinga eliphansi labantu abasha abangasebenza ezweni. Ngenxa yalesi sizathu, inani labantu abaphupha ngokusebenza nokuhlala eJalimane liye landa kakhulu eminyakeni yamuva.
Iyini Iholo Elimaphakathi eJalimane?
Ekhuluma ngemisebenzi Iholo elimaphakathi eJalimane cishe ama-Euro angu-2.000 (ama-Euro ayizinkulungwane ezimbili) aseduze. umholo omncane waseJalimaneUma inani lika-2021 likhona 1614 Euro sekunqunyiwe. Le mali icishe ilingane nama-Euro ayi-9,5 ngehora. Ngalesi samba, iJalimane iklelisa endaweni yesi-5 phakathi kwamalungu e-European Union. Iholo elincane eJalimane Lapho abantu abasebenza nabantu becabanga, kuqhamuka imisebenzi engenamakhono. Inani lale misebenzi lincane kakhulu.
Bangama-2% kuphela abantu abasebenzela amaholo amancane. Ngisho nasemaqenjini emisebenzi afika emqondweni njengemisebenzi engasebenzi njengabasebenzi basemafemini, oweta, inani lomholo lingaphezu kwenani elilinganiselwe. Futhi, uma kudingekile ukwenza ukuhlolwa kweholo elincane, kungenzeka ukuthi uphile ngokunethezeka ngeholo elincane eJalimane. Ngalesi samba, kungenzeka ukuhlinzeka ngazo zonke izidingo zezindlu, ukudla nesiphuzo, ezokuthutha nokuxhumana umuntu azidingayo ukuze aqhubeke nokuphila kwakhe.
Ukwenza isibonelo, isilinganiso sanyanga zonke sokuthenga igrosa komuntu ohlala eJalimane singama-Euro angu-150. Yebo, le mali ingahluka kuye ngenani nohlobo lwemikhiqizo oyithengayo, kodwa kuyenzeka ukuthi umuntu athenge inyanga yonke, okuhlanganisa inyama ebomvu, inyama emhlophe nenhlanzi, ngale mali. Futhi, kumuntu ohlala eJalimane, izindleko zokuqasha zanyanga zonke zizoba ngama-Euro angama-600-650. Ngisho nalapho izindleko zasekhishini, ezokuthutha, ukuxhumana nezinye izindleko zengezwa, umholo wama-Euro angu-1584 uzokwanela ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zomuntu. Ngisho nemisebenzi lapho umuntu engakwazi ukubamba iqhaza emalini ethile izosala yokonga.
Uyini Umehluko Wemiholo phakathi kweJalimane neTurkey?
Uyini Umehluko Oncane Wamaholo Phakathi kweTurkey neJalimane Uma ubuza, singenza isiqhathaniso esifana nalesi. Isibonelo, eJalimane, izidingo eziyisisekelo zihlangatshezwa ngama-Euro ayi-1000 ngenyanga. Uma kucatshangelwa ukuthi umholo omncane eJalimane ngama-Euro ayi-2021 ngo-1640, ama-Euro angama-600 asele angathengwa ngokungabalulekile, okungukuthi izidingo zokunethezeka, noma wonke umholo omncane ungabekelwa eceleni ukonga.
Lapho Usebenza Ngenkokhelo Encane EJalimane?
Umholo omncane waseJalimane unyuswe kusuka ku-€ 2020 kuya ku-€ 2021 ngesikhathi soshintsho ukusuka ku-1,584.0 kuya ku-1,614.0. Yize kunjalo, isibalo sabantu abasebenzela amaholo amancane silinganiselwe ezweni. Ngoba iholo elinconyiwe lemisebenzi eminingi lingaphezu kweholo elincane. Isibonelo, umholo wesisebenzi sasefekthri cishe u-3000 Euros. Futhi, iholo labasebenzi abanakekela iziguli nasebekhulile, abaphakathi kwamaqembu asebenzayo akhokhelwa kancane eJalimane, lingama-Euro angama-3000.
IMALI ELINGENE EJALIMANE
INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi
# Umholo omncane waseJalimane wango-2021
# Iyini Iholo Elimaphakathi eJalimane?
# Uyini Umehluko Wemiholo phakathi kweJalimane neTurkey?
# Lapho Usebenza Ngenkokhelo Encane EJalimane?
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe enyangeni engu-1 edlule, ngo-Okthoba 29, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Okthoba 29, 2021.
Ngikukhethele isihloko esingahleliwe, okulandelayo yizihloko zakho zenhlanhla. Iyiphi ongathanda ukuyifunda?
Ukufunda isiJalimane eJalimane
Impilo Yezingane eJalimane
Iseluleko Senkambo YaseJalimane eBerlin
Izithombe ezivela eJalimane eJalimane Izithombe zaseJalimane Izithombe
Iyini Inkolo YaseJalimane? Iyiphi Inkolo AmaJalimane Ayikholelwayo?
Iseluleko Sezifundo ZaseJalimane eMunich
Luthini uhlelo lweSikole eJalimane?
Amaqiniso NgeGermany, Ungayithola Kanjani Indawo eJalimane, Izithombe zaseGerman, Germany-Deutschland
Imibhalo Edingekayo Yomshado eJalimane
Tags: iholo elincane laseJalimane, umholo omncane eJalimane, Ingakanani iholo elincane eJalimane?, malini umholo omncane eJalimane, liyini iholo elincane eJalimane
Izifundo zaseJalimane eziyisisekelo
Izimpahla zesikole saseJalimane
Izilimi Ezinhle ZaseJalimane
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane
Ukudla neziphuzo zaseJalimane
Ama-German watch (die uhrzeit), Ukusho amahora aseJalimane, Wie spät is?
Izinombolo zesiJalimane (Die Zahlen)
Izinsuku ZaseJalimane, Izinsuku ZaseJalimane Zeviki (Wochentage)
I-Das Deutsche Alphabet, Izincwadi ZaseJalimane
IziNyanga zaseJalimane nezinkathi zaseJalimane
Izibonelo zemisho emayelana nobungcweti nobungcweti ngesiNgisi
Imibala yesiNgisi nemisho eyisibonelo mayelana nemibala yesiNgisi
Izabizwana zomuntu zesiNgisi
Amazwe Nezizwe zamaNgisi
Izinombolo zesiJalimane zingafika ku-100
Izinombolo zesiJalimane zingafika ku-20
Kusho ukuthini ukusa okuhle ngesiJalimane, ukuthi sawubona kanjani ngesi-German
Ngingathanda in English
Usho ukuthini ngesiJalimane?
Ngingabonga kanjani ngesiJalimane
Inqubomgomo yethu Yobumfihlo
Uhlelo Lokufunda lwaseJalimane
Amaphethini okukhuluma aseJalimane
Imidlalo yamaJalimane, Izinhlelo namaFayela
Izifundo Zevidiyo ZaseJalimane
Izikhathi ZamaJalimane neziGwebo
Okuphakathi - Izifundo zaseJalimane ezithuthukile
IZINDABA EZIVELA KITHI
Isayithi lokufunda isiJalimane
Incwadi Yokuzifundela yesiJalimane
Ibhuku le-10 le-German Auxiliary Textbook
Incwadi Yesifundo YesiGerman Engeziwe yesi-9
Imilayezo ephezulu ye-WhatsApp ehlekisayo
I-German Teachers German Education Education Set
Lokhu kusetha akusebenzi
I-Quiz yaseJalimane ewina imiklomelo
Ukusethwa Kwezemfundo YaseJalimane
UCoyright 2004-2021 Wonke Amalungelo Agodliwe. | ALMANCAX
IGERMANCAX EMHLABENI: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu